बजेट कार्यान्वयनमा वैदेशिक सहयोग ः ३ खर्ब ७२ अर्ब कसरी जोहो हुँदै छ ? – Nepalpostkhabar
बजेट कार्यान्वयनमा वैदेशिक सहयोग ः ३ खर्ब ७२ अर्ब कसरी जोहो हुँदै छ ?
नेपालपाष्ट खबर । २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ०८:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं – चर्को विरोधका बीच जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि बजेट ल्याएको सरकारले यसको कार्यान्वयन गर्न मुलुकभित्रको स्रोतले धान्न नसक्ने भएपछि रू ३ खर्ब ७२ अर्बभन्दा बढी वैदेशिक सहयोग जुटाउने तयारी गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा सरकारले लिने कुल वैदेशिक सहयोगमध्ये ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै छ भने रू। ६३ अर्ब ३७ करोड अनुदान पाउने आशा गरेको छ । सरकारका अनुसार बहुपक्षीयतर्फ कुल २ खर्ब ५४ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख आउँदै छ । यसमध्ये १६ अर्ब ४९ करोड २६ लाख रुपैयाँ अनुदान आउनेछ भने ऋण २ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ४८ लाख ऋण प्राप्ति हुनेछ ।
द्विपक्षीय साझेदारीबाट आगामी आर्थिक वर्षमा दातृ निकायबाट कुल रू ९७ अर्ब ४२ करोड ८ लाख जोहो गरिँदै छ । यसमध्ये ३६ अर्ब २९ करोड २४ लाख अनुदान हो भने ६१ अर्ब १२ करोड ८५ लाख ऋण प्राप्ति हुने अनुमान सरकारको छ । संयुक्त कोषमार्पmत सरकारले कुल २० अर्ब ५९ करोड १२ लाख जोहो गर्नेछ । यसमध्ये १० अर्ब ५९ करोड १२ लाख अनुदान हो भने १० अर्ब ऋण हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा बहुपक्षीयतर्फ एशियाली विकास बैंकबाट सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब ११ करोड वैदेशिक सहयोग लिएर बजेटमा आएका कार्याक्रम कार्यान्वयन गर्न खोज्दै छ । विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता ठूला दातृ निकायले सरकारलाई ठूलो सहयोग गर्न लागेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार द्विपक्षीयतर्फका दातृ निकायहरूमा भारत सरकारले मात्रै आगामी बजेट कार्यान्वयनका लागि २८ अर्ब ८० करोड सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको छ । जापान सरकारले २० अर्ब २७ करोड, छिमेकी चीनले १७ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक सहयोग गर्दै छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा। जगदीशचन्द्र पोखरेल बजेट कार्यान्वयनको पक्षलाई बीचैमा छाडेर सरकार राजनीतिक दाउपेचमा उत्रँदा लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उनका अनुसार यसले सरकारको प्राथमिकता माथि नै प्रश्न उठाइरहेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग दृढ इच्छा शक्तिको खाँचो रहेको उनी बताउँछन् ।